The Belmont Report rụrụ ụka na ụkpụrụ nke Ikpe Ziri Ezi nke na-agwa nkesa ibu arọ na uru nke nnyocha. Ya bụ, ọ na-ekwesịghị ịbụ ikpe na otu ìgwè na ọha mmadụ na-agba akwụ ụgwọ nke nnyocha mgbe ọzọ ìgwè nēwere ihe ubi uru ya. Dị ka ihe atụ, na nke 19 na narị afọ nke 20, ibu arọ nke ije ozi dị ka nnyocha na-achị na ọgwụ ọnwụnwa dara n'ụzọ dị ukwuu na ndị ogbenye, na uru nke mma nlekọta ahụ ike asọpụta n'ụzọ bụ isi n'ebe ndị ọgaranya.
Na omume, ụkpụrụ nke Ikpe Ziri Ezi na mbụ kọrọ isi nrọ gburugburu echiche na-adịghị ike ndị mmadụ ga-echedo si na-eme nnyocha. Yabụ, na-eme nnyocha ekwesịghị ikwe ka ụma na-eri anụ na nke dighi ike. Ọ bụ a na-enye nsogbu ụkpụrụ na n'oge gara aga, a ukwuu nke ethically mfịna ọmụmụ abuana nnọọ ngwangwa sonyere gụnyere agụghị oké akwụkwọ na disenfranchised ụmụ amaala (Jones 1993) ; mkpọrọ (Spitz 2005) ; institutionalized, n'uche ụmụaka nwere nkwarụ (Robinson and Unruh 2008) ; na ndị agadi na debilitated ụlọ ọgwụ ọrịa (Arras 2008) .
Around 1990, Otú ọ dị, echiche nke Ikpe Ziri Ezi malitere ịkụ si nchebe ohere (Mastroianni and Kahn 2001) . Dị ka ihe atụ, na oru rụrụ ụka na ụmụ, ụmụ nwaanyị, na agbụrụ dum dị mkpa ka e n'ụzọ doro anya gụnyere na-adakarị ọnwụnwa nke mere na ìgwè ndị a pụrụ irite uru site na ihe ọmụma nweela site ọnwụnwa ndị ahụ.
Ke adianade ajụjụ banyere nchebe na ohere, ụkpụrụ nke Ikpe Ziri Ezi na-kọrọ isi nrọ ịkpọlite ​​ajụjụ banyere ihe kwesịrị ekwesị kwụọ ha ụgwọ n'ihi sonyere-ajụjụ nke bụ isiokwu ufiop arụmụka na ike na ụkpụrụ ọma (Dickert and Grady 2008) .
Ime ihe e nke Ikpe Ziri Ezi na ihe atụ atọ na-enye ụzọ ọzọ inwale ha. Sonyere na onye ọ bụla nke ọmụmụ ụgwọ atụrụ n'ụzọ ego. Encore-akpọlite ​​ndị kasị dị mgbagwoju ajụjụ banyere ụkpụrụ nke ikpe ziri ezi. Ọ bụ ezie na ụkpụrụ nke Beneficence nwere ike na-atụ aro ewepu sonyere na mba na repressive ọchịchị, ụkpụrụ nke Ikpe Ziri Ezi nwere ike na-arụ ụka megide ịgọnahụ ndị a ga-ekwe omume ka soò na-na-erite uru site-ezi nha nke Internet nnyocha. The ikpe nke Ire, Ties, na Time nwekwara jụrụ ajụjụ. Na nke a, otu ìgwè nke ụmụ akwụkwọ na-agba n'ibu arọ ndị nnyocha na ọha mmadụ n'ozuzu uru. Ka odo anya, Otú ọ dị, nke a abụghị ihe emetụta karịsịa bi. N'ikpeazụ, na mmetụta uche Contagion ndị sonyere ndị a sample si bi yikarịrị na-erite uru na ya pụta nke nnyocha, a ọnọdụ ọma kwekọọ n'ụkpụrụ nke ikpe ziri ezi.